သင်က “Activity History “ option ကို ပိတ် ထားရင်တောင်Window10ကသင်၏ “Activity History “ များ ကို Microsoft သို့ ပေး ပို့ - Myanmar Tech Reviews
Window 10 ဟာ စာ ဖတ် သူ ရဲ့ PC ထဲမှာ ရှိ တဲ့ Application တစ်ခုကနေ တဆင့် “Activity History ” တွေကို စုဆောင်း ပြီး Microsoft သို့ ပေး ပို့ ပါ တယ် ။ Microsoft’s Privacy Dashboard ထဲ မှာ disable သို့ မ ဟုတ် clear လုပ် ရင်တောင် သင့် ရဲ့ “Activity History “ တွေ ရှိနေ ဆဲ ပါ ပဲ။”Send my activity history to Microsoft”ဆို တဲ့ option ကို disable လုပ် ဖို့ရန် Microsoft က ဒါ ဟာ အသုံးပြု သူ ရဲ့ အဖြေရှာတဲ့ဒေတာအဆင့်သတ်မှတ်ထားရမယ် လို့ ပြန် လည် ဖြေရှင်း ပါ တယ်။ Microsoft မှ app ကိုအသုံးပြုမှုလမ်း ကြောင်းပေးပို့ နေ တာကို Windows 10 မှာစ တင် တားဆီးပါလိမ့်မယ်။ ဤပြဿနာကိုမကြာသေးမီက Reddit အပေါ်ဆွေးနွေး အတည် ပြု ပေး ခဲ့ ကြ ပါတယ်။ စမ်းသပ်ဖို့ က အ တော်လေး လွယ် ကူ ပါ တယ် Settings > Privacy > Activity History and disable “Send my activity history to Microsoft.”. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ပေါ်မှာ ကိုယ် တို င် disabled လုပ် နိုင် လာခဲ့ပါသည်။ Clear Activity ကို ရှင်းလင်းမည် ဆို ပါ က “Clear ကို “ ကလစ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသီအိုရီ အရ Microsoft ရဲ့ဆာဗာများမှာ ရှိသောဒေတာများရှင်းလင်း သွား သင့် ပါ တယ် ။ တကယ် တော့ အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ Activity History တွေ ကို “Privacy Dashboard” link ကနေ click လုပ်ပါ။ web browser မှာ Microsoft ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေး Dashboard ကို ရောက် ရှိ သွား ပါ လိမ့်မယ် ။ Microsoft အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့Historyကို ကြည့်ရှုရန် web page စာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာ “Activity” link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ရဲ့ PC မှာ အသုံးပြု မှုခဲ့ တဲ့ application applications များစာရင်းတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးထူးဆန်းပြီး နှင့်ရှုပ်ထွေး မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်. Microsoft က Window 10 ထဲမှာ user တွေ ရဲ့ Activity History တွေ ကို applications များ မှ တဆင့် စု ဆောင်း နေ သလို ပါ ပဲ ။ Window 10ဟာ Activity History တွေကို စုဆောင်း ထား တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ Window 10 ရဲ့ Default အ ဖြေရှာတဲ့ setting ကို“Full,” says it sends “info about websites you browse and how you use apps and features,” Windows 10 ရဲ့ ပုံ မှန် ပေး ပို့ တဲ့ စ နစ် များ မှ တဆင့် Microsoft ထံ သို့ တိုက် ရိုက် ပေး ပို့ ပါ လို့ ပြော ပါ တယ် ။ Setting > Privacy Privacy > Diagnostics & Feedback လမ်း ကြောင်း မှ တစ် ဆင့် တွေ့ နှိင် ပါ တယ်။
ဒီ option ကိုသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါ လိမ့် မယ် ။အဆိုပါသီးသန့်လုံခြုံရေးအတွက် Dashboard ကိုဒီထက်ပိုပွင့်လင်းအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သင့်ပါ တယ် ဒါပေမယ့် ယခု အခါ ပိုမိုရှုပ်ထွေးနေပါတယ် ။
Window 10 ဟာ စာ ဖတ် သူ ရဲ့ PC ထဲမှာ ရှိ တဲ့ Application တစ်ခုကနေ တဆင့် “Activity History ” တွေကို စုဆောင်း ပြီး Microsoft သို့ ပေး ပို့ ပါ တယ် ။ Microsoft’s Privacy Dashboard ထဲ မှာ disable သို့ မ ဟုတ် clear လုပ် ရင်တောင် သင့် ရဲ့ “Activity History “ တွေမှာ ရှိနေ ဆဲ ပါ ပဲ။”Send my activity history to Microsoft”ဆို တဲ့ option ကို disable လုပ် ဖို့ရန် Microsoft က ဒါ ဟာ အသုံးပြု သူ ရဲ့ အဖြေရှာတဲ့ဒေတာတေွကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားရပါမယ် လို့ ပြန် လည် ဖြေရှင်း ပါတယ်။ Microsoft မှ app ကိုအသုံးပြုမှုလမ်း ကြောင်းပေးပို့ နေ တာကို Windows 10 မှစ တင် တားဆီးပါလိမ့်မယ်။ ဤပြဿနာကိုမကြာသေးမီက Reddit အပေါ်ဆွေးနွေး အတည် ပြု ပေး ခဲ့ ကြ ပါတယ်။ စမ်းသပ်ဖို့ က အ တော်လေး လွယ် ကူ ပါ တယ် Settings > Privacy > Activity History and disable “Send my activity history to Microsoft”. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ပေါ်မှာ ကိုယ် တို င် disabled လုပ် နိုင် လာခဲ့ပါသည်။ Clear Activity ကို ရှင်းလင်းမည် ဆို ပါ က “Clear ကို “ ကလစ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသီအိုရီ အရ Microsoft ရဲ့ဆာဗာများမှာ ရှိသောဒေတာများရှင်းလင်း သွား သင့် ပါ တယ် ။ တကယ် တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။
မှာ Activity History တွေ ကို “Privacy Dashboard” link ကနေ click လုပ်ပါ။ web browser မှာ Microsoft ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေး Dashboard ကို ရောက် ရှိ သွား ပါ လိမ့်မယ် ။ Microsoft အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့Historyကို ကြည့်ရှုရန် web page စာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာ “Activity” link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ရဲ့ PC မှာ အသုံးပြု ခဲ့ တဲ့ applications စာရင်းတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးထူးဆန်းပြီး ရှုပ်ထွေး မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်. Microsoft က Window 10 ထဲမှာ user တွေ ရဲ့ Activity History တွေ ကို applications များ မှ တဆင့် စု ဆောင်း နေ သလို ပါ ပဲ ။ ဒါေပမဲ့ Window 10ဟာ Activity History တွေကို စုဆောင်း ထား တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ Window 10 ရဲ့ Default အ ဖြေရှာတဲ့ setting ကို
“Full,” says it sends “info about websites you browse and how you use apps and features,” Windows 10 ရဲ့ ပုံ မှန် ပေး ပို့ တဲ့ စ နစ် များ မှ တဆင့် Microsoft ထံ သို့ တိုက် ရိုက် ပေး ပို့ ပါ လို့ ပြော ပါ တယ် ။ Setting > Privacy Privacy > Diagnostics & Feedback လမ်း ကြောင်း မှ တစ် ဆင့် တွေ့ နှိင် ပါ တယ်။
ဒီ option ကိုသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါ လိမ့် မယ် ။အဆိုပါသီးသန့်လုံခြုံရေးအတွက် Dashboard ကိုဒီထက်ပိုပွင့်လင်းအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သင့်ပါ တယ် ဒါပေမယ့် ယခု အခါ အသုံး ြပု ရပိုမိုရှုပ်ထွေးနေပါတယ် ။